Nidaamka Shidaalka ee Matoorada iyo Dabka Gaariga | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Kafogow Dadka Aan Horumarka Jeclayn, Had iyo Jeerna Wax Dhaliila!
Farax Xasan Macallin, December 16, 2018
Tahriibka Sharci Darada Ah Iyo Dhibaatooyinkiisa
Faysal Maxamuud, May 31, 2018
Saamaynta Covid-19 ee Kastamyadda Saylac iyo Cigaal Airport
Maxamed Xirsi Faarax — April 11, 2020
Qoraalkan waxa aan uga hadli doona: Nidaamka shidaalka ee matoorada iyo Dabka gaariga.
Nidaamka shidaalka: nidaamkan waaa habka shidaalka looga sooqaadayo taangiga shidaalka laguna gaarsiinayo galaasyada matoorka, ayada oo lagu dhibcinayo ama lagu durayo xadigii shidaal ee loogu talo galay in uu sameeyo qaraxa (ama gubashada) kadhex dhacaysa galaasyada, taas oo dhalinaysa wareega baabuurka.
Noocyada matoorka ee shidaalka:
Matoorku waxa uu uqaybsamaa labo qaybood oo kala ah matoorka kushaqeeya naafto iyo matoor kushaqeeya bartool (Bansiin). Sidoo kale, Matooradu waxa ay usamaysan yihiin qaabka ay ugu jiraan bostomadu, ayagoo ah sadex qaab:
In ay usamaysan yihin qaab taag ah
In ay usamaysan yihiin qaab jiif ah ama dhinacdhinac ah
Ama in ay usamaysan yihiin qaab V ah
Dhamaan matoortada waxa ay ushaqeeyaan si isku mid ah marka laga eegayo qaabka gubashada shidaalka, laakiin waxa ay kukala duwan yihiin heerka cadaadiska shidaalka, heer kulka iyo qaabka qubashadu udhacayso.
Bostomada oo dhan waxa ay maraan afar shaqo oo wareeegto ah sida aan horey ugu soo sharaxnay qaabka ay ushaqeeyan bostomadu, afartaas shaqo oo ah:
Qaadashadaa shidaal iyo hawo
Cadaadis ay soo cadaadiyaan shidaalkii iyo hawadii ay qaaten
Gubashoo ay kusameyaan shidaalkii iyo hawadii
Iyo qashin saarid ay dibada usaaran shidaalkii gubtay
Afartaas shaqo oo wareegto ah bay qabtaan bostomadu sidaa dartee waxa ay kukala duwan yihin qaabka ay uqabanayaan afartaas shaqo iyo sida ay kudhacayaan
Matoor injekshanka ah qaabka uu Batroolku (Bansiinku) ugu yimaado:
Batroolka uu isticmaalo injekshanku waxaa Batrool awood leh, kan uu isticmaalo kaalbeedharkuna waa mid aan awood badan lahayn. Batroolku wax uu kukaydsan yahay Salbatooyada waxaana kasooqada ama kasoo Burqiya, fiyuul bam (Wii) Bamkaas waxaa uu kudhex jiraa Salbatooyada dhexdeeda waxaa uuna kushaqeeyaa dab ay maamusho maskaxdu, waxa uuna leeyahay meel uu shidaalku kasoogalo iyo meel uu kabaxo, shidaalku meesha uu kasoogalo waxaa uu kuleeyahay shaandho wasakhda kareebta.
Waxa kaloo Bamka kudhex jira Footari loogu talo galay in batroolka baxaya uu dib ugu soolaban. Batroolka Wiida kasoobaxa waa batrool awoodiisu sarayso. Batroolku marka uu Wiida kasobaxo waxa uusiimaraa filterka batroolka(kulucad) si ay wasakhda uga reebto. Batroolka kulucada waa uu kasiibaxaa oo waxa uu sii aadayaa Waaskada Jiktarada.
Waaskada Jiktaradu waa Waasko ay kuwada xiran yihiin Irbadaha oo dhan waxa ayna kaqaataan Batroolka. Batroolku marka uu tago Irbadaha dhexdooda waxa maamulka lawareega maskaxada Gaariga, Irbaduhuna waxa ay kushaqeeyan dabka maskaxda Baabuurka sidaa darted, Bostonkasta marka uu batrool ubaahan yahay ayey ufurmayaan Irbaduhu. Batrolka saaidka ah waxaa uu kalaabanayaa Waaskada Irbadaha, waxa uuna dib ugu laabanayaa Salbatooyada.
Matoorka Naaftada ah:
Sidoo kale, Bostomka Matoorka Naaftada ah waxa uu qaadanaya Hawo iyo Shidaal waxa uuna udagayaa hoos kadib waxa uu cadaadis kusoo samaynayaa shidaalkii iyo hawadii uu qaatay asaga oo cadaadis kabadan cadaadiska matoorka betroolka ah kusoo samaynaya shidaalkii, caadaadiskaas badan ayaa keenaya in heerkulku aad usiyaado kaas oo sababaya qaraxa iyo gubashada Shidaalka.
Matoorka batroolka ah qaraxa ama gubashada waxaa sameeya Balaaga, halka matoorka naaftada ah qaraxu uu kadhasho cadaadiska sare ee uu bostonku kusameeyo shidaalka. Matoorka batrolka ah waxa ay shidaalka iyo hawadu isku qasmaan inta uusan cadaadisku dhicin halka matoorka naaftada ah aysan hawada iyo shidaalku isku qasmaan gubashada kadib. Matoorka batroolka ah waxa uu isticmaalaa Balaagyo halka matoorka naaftada ah uu isticmaalo Jiktaro.
Qaabka ay naaftadu ugu timaado matoorka naaftada ah:
Naaftadu waxa ay ku kaydsan tahay Taangiga ama Salbatooyada, waxaana kasooqada Tuubo. Tuubadaas waxay dhexgashaa Taangiga si ay shidaalka uga sooqaado, afka ay shidaalka kuqadayso waxa ay kuleedahay shaandho kareebta wasakhda, tuubadaaaas marka ay kasoobaxdo Taangiga waxa ay soo gashaa Raas filtarka. Raas filterku waxa uu usii gudbiyaa filterka, si uu wasakhda uga reebo. Naaftadu marka ay filterka kasoobaxdo waxa ay soomaraysaa tuubo kale ee raas filterka, waxayna aadaysa Bumbada Naaftada, Bambadu marka ay wareegto dabna hesho waxa ay burqisaa naaftada. Naftada ay burqisay waxay kasoobaxaysa Naasalada iyadoo ugu sobaxaysa qayb qayb. Naaftadaas soobaxaysa waxa ay usoo baxyasaa qaab goos goos ah. Naasalada waxaa ku xirma ganeetooyin naaftada ugeeya Jiktarada.
Naftadu markay Jiktarada tagto waxay uga sii gudubtaa Bostomada. Jiktaradu waxay soo celiyaan naaftada saaidka ah, Naaftadaas waxay aadaysaa dhinaca Bumbada, Bumbadana waxaa kasoobaxa naafto said ah, labadaas naafto waxay aadayaan taangiga shidaalka oo ay dib ugu noqonayaan tuubo layiraahdo Tuubo saaid.
Nidaamka dabka baabuurta: Waa nidaam dabka ay dhalinayso diinimadu, laguna kaydinayo bateriga baabuurka, kaas oo dabka gaarsiinaya nalalka, raadiyaha iyo agabka kale ee Gaariga ee kushaqeeya tamarta korontada sida Saacadaha baabuurka.
Nidaamka daarista baabuurka: Nidaamka daarista baabuurku waxa uu kabilowdaa beteriga gariga. Marka furaha lagaliyo meesha gaariga lagadaaro, furaha waxaa loowarejiyaa barta (booska) daarista kadibna kadibna qadar yar oo Tamar koronteed ah ayaa raacaysa botonka ama iswiijka kaas oo ugudbinaya kooxda daarista, kuwaas oo ogolaanaya Tamar koronteed sare in ay raacdo xargaha beteriga si uu ugaarsiiyo Matoor daaraha.
Dabka baabuurta waa dab toos ah oo aan ahayn dab qulqulaya. Dabkaas magaciisu waa DC. Dabka baabuurtu waxa uu uqaybsamaa laba qaybood 12V iyo 24V.
Nidaamka Dab dhalinta: Nidaamkan waxa uu kabilowdaa marka furaha gaariga lagu rogo waxaana xariirsamaya dabka beteriga iyo xariga daarista kadib waxaa kululaanaya qudbi koronteedka kul sare, kadibna dabka waxa uu ugudbinayaa dab qaybiyaha, kaas oo uqaybinayaa balaagyada, kuwaas oo (gubaya) qarxinaya hawada iyo shidaalka kujirta galaasyada.
Nidaamka Guluubyada iyo layrarka: Nidaamkan waxa uu ka kooban yahay layrar iyo guluubyo kuwaas oo kuxiran horta gaariga, dhinacyada, gadaasha iyo kabadhka gaariga, gawaarida qaar ayaa leh guluubyo kuxiran matoorka dushiisa.
Tags: Nidaamka Shidaalka ee Matoorada iyo Dabka Gaariga
Next post Aqoontu Maxay Soomaalidu u Bedeli Waysay?
Previous post Qanjirada Jirka Maxay U Qabtaan?